Ku xakamee TV-ga dabka codka (oo leh Echo, Alexa oo aan hago lahayn) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Haddii aan haysanno qalabka 'Amazon Echo', sida Echo Dot-ka wanaagsan, hadda waa suurtagal Ku amro dabka TV Stick adoo adeegsanaya codkaaga, iyada oo aan loo baahnayn kontoroolka fog. Dembigu ka dibna isagoo riixaya furaha gacanta codka on Remote TV dabka, waxaad ku dhaqaajin kartaa menus adoo hadlaya, mahadsanid xiriirka ka dhexeeya Fire TV iyo Echo. Nidaamkan, kaliya ma raadin kartid dhacdooyinka, filimada iyo taxanaha TV-ga, laakiin sidoo kale waxaad bilaabi kartaa oo joojin kartaa ciyaarta, dib u laabo ka dibna u fiirso macluumaadka uu codsaday kaaliyaha codka ee TV-ga, sida cimilada, kalandarka ama wixii kale. Waxaad sidoo kale daawan kartaa sawirro ay duubtay kamarad amni oo ku xiran Alexa-ka TV-ga waxaadna siineysaa bedel kale markii aadan heli karin Fire TV Stick remote ama aadan rabin inaad u kacdo inaad qabsato oo aad wax walba ku xakameyso codkaaga oo keliya.
Shuruudda keliya ee loo adeegsado Dabka TV-ga codka leh waa inuu ku xiran yahay aaladda loo yaqaan 'Amazon Echo qalab'. Tan si fudud ayaa hadda loo samayn karaa, iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Alexa ee ku jira Android ama iPhone. Haddii isla koontada Amazon laga dejiyo Fire TV iyo Echo, haddii barnaamijka Alexa uu ku shaqeynayo goobaha TV-ga Dabka, si fudud u isticmaal barnaamijka Alexa ee taleefankaaga ku dar Fire TV qalabka Echo gacanta ku haya.
Abka Alexa, waxaad tagtaa tabta Kuwa kale, ka dibna taabo Xeerarka iyo ugu dambeyntii gudaha TV iyo muuqaal: Halkan waxaad ku riixi kartaa astaanta TV-ga dabka si aad ugu darto qalabka koontaroolka Alexa. Isku xirnaanta otomaatiga ah ayaa lagu gaari karaa adigoo u sheegaya Alexa on Echo inuu ciyaaro filim; Kadib Alexa wuxuu ku weydiin doonaa haddii aad rabto inaad dhaqaajiso xakamaynta codka TV-ga Fire.
Marka tan la sameeyo, iyada oo aan la isticmaalin taleefan ama hago, waa suurtagal u sheeg qalabkeena Echo ama Echo Dot: Wax la mid ahAlexa, i tus cimilada"inaad ku aragto saadaasha hawada shaashadda TV-ga, adigoon codkaaga ku jawaabin.
Amarada ugu faa iidada badan ee leh Alexa si loo xakameeyo TV-ga Dabka waa sida soo socota:
Alexa Apri Netflix (waxaa loo isticmaali karaa codsi kasta oo rakiban).
Alexa wuxuu helaa "cinwaan" (Alexa wuxuu ka raadin doonaa filim ama muujiya dhammaan barnaamijyada la rakibay, sida Netflix ama Prime Video.)
Alexa wuxuu dhigay cinwaanka filimka (inaad isla markiiba bilowdo u ciyaarista filimka aad raadineyso).
Alexa wuxuu helaa majaajillo (Alexa wuxuu ka raadin doonaa filimada noocaas ah.)
Alexa ka raadi cinwaanka Youtube (si gaar ah looga raadiyo Youtube; raadinta gaarka ah uma shaqeyso dhammaan codsiyada).
Alexa Ku Laabo Guriga O Gurigaaga tag (inaad ku noqoto shaashadda weyn).
Xullo Xul Ah (si loo doorto sanduuqa la iftiimiyay ee ku yaal dusha TV-ga).
Alexa Tag bidix ama midig (si xulashada bidix ama midig loogu dhaqaajiyo mid mid).
Alexa U dhaji bidix ama midig (in loo dhaqaajiyo xulashada midig ama bidix afar shay si dhaqso loogu dhaqaaqo).
Alexa vai giu o vai su (inaad kor iyo hoos ugu kacdo xulashada menu).
Alexa arag fiidiyowyadeyda (si aad u tagto qaybta fiidiyowgayga ee Prime Video).
Maaddaama aad ka arki karto macluumaadka cimilada ee TV-ga adoo codka ku weydiinaya Alexa, waxaad sidoo kale weydiin kartaa:
"Alexa, i tus kalandarka"
"Alexa, i tus kaamerada"
"Alexa, i tus liiska waxa la qabanayo"
"Alexa, i tus taraafikada Rome"
"Alexa, i tus liiska wax iibsiga"
Tilmaamo dheeraad ah oo ku saabsan tijaabinta Fire TV iyo Echo, waxaan aragnay maqaal kale oo ku saabsan sida ka dhageyso codka TV-ga (FireTV) Amazon Echo
ADEER: Ku xakamee TV-ga codkaaga
Haddii aad runtii rabto inaad ku xakameyso TV-gaaga codkaaga, waad ku sameyn kartaa adoo iibsanaya qalab u rogi kara amarrada codka Alexa amarrada hagida fog. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ka beddeli kartaa kanaalada TV-gaaga adoo adeegsanaya codkaaga adoo ku mahadsan Amazon Echo. Si tan loo sameeyo, waa inaad ku iibsataa qalab sidan oo kale ah Smart Home Hub 20 euro, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku xakameyso shay kasta oo leh aaladda hagida codka.
AKHRISO: Sida loogu xiro Alexa TV kasta